Mihaona amin'ireo Maherifo momba ny fizahantany 16 manangana ny dia amin'ny Andro manerantany ho an'ny fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Podcasts » Mihaona amin'ireo Maherifo momba ny fizahantany 16 manangana ny dia amin'ny Andro manerantany ho an'ny fizahan-tany
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • LGBTQ • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Podcasts • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • fanorenana • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Septambra 27, 2020
Andro manerantany fizahan-tany eran-tany ny taona 2020. Ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany dia iharan'ny fanafihana noho ny valanaretina COVID-19. Asa an-tapitrisany maro no tandindomin-doza na efa nesorina.
Misy ireo mpampita sy fanta-daza fanta-daza, ary misy ireo vaovao miovaova indraindray sy tsy dia fantatra loatra. Niteraka “olana tsara” izy ireo, misolo tena ireo mpikatroka mafàna fo vaovao mifototra amin'ny lova tsy azo ovaina an'ny kongresista amerikana John Lewis.
Fivorian'ny sakafo maraina ITB Berlin 2020 hiadian-kevitra momba ny COVID-19
Fanarenana.travel dia vondrona mpitarika fizahantany toy izany avy amin'ny firenena 119 izay niara-nivory rehefa nanjary loza mitatao lehibe indrindra natrehin'izao tontolo izao ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Rebuilding.travel dia nanomboka tamin'ny sakafo maraina nomanina tao amin'ny Grand Hyatt Berlin niaraka tamin'ny Safer Tourism, PATA, ary eTurboNews tamin'ny 5 martsa 2020, nandritra ny (nofoanana) ITB Berlin Ny resaka dia natao tsy nisy ITB ary nitohy tamin'ny buzz.travel tamin'ny 25 martsa 2020 niaraka tamin'ny Dr. Peter Tarlow sy Juergen Steinmetz.
Androany no Andro maneran-tany momba ny fizahan-tany ary manangana indray Efitrano fivahinianan'ny mahery fo iraisam-pirenena.
Minisitra, tale jeneraly, mpitantana jeneraly, masoivohon'ny fizahan-tany, mpanao gazety, mpitari-dia. "Miara-miasa amin'izany isika rehetra", hoy ny mpiara-manorina an'i Juergen Steinmetz, izay mpanonta ihany koa eTurboNews.
Dr. aleb Rifai sy Louis d ”Amore
Dr. Taleb Rifai, a sekretera jeneraly maharitra roa ao amin'ny United Nations World Tourism Organization dia mpanoro hevitra ary iray amin'ireo mpikambana mavitrika indrindra amin'ity vondrona ity.
Dr. Peter Tarlow, manam-pahaizana momba ny fiarovana sy ny fiarovana ny fizahan-tany ary ny filaminana dia nitondra traikefa nandritra ny 25 taona. Nanatevin-daharana ny fankalazana ny Heroes momba ny fizahantany eran'izao tontolo izao izy talohan'ny nanombohany nankalaza Yom Kippur. Peter koa dia raby any Texas.
Misy minisitra roa mipetraka ao amin'ity vondrona ity, samy tsy manam-paharoa amin'ny fisainana sy ny fitaomana manerantany.
The Ny sekretera sandoka Najib Balala avy any Kenya no minisitra voalohany nanaiky ny Tombo-kase fizahan-tany azo antoka ho an'ny fireneny ary lasa mahery fo fizahantany voalohany amin'ny 27 aogositra. Ny sekretera koa dia mpitarika ny UNWTO Executive Council.
Hon. Najib Balala (ankavia), ny minisitry ny fizahan-tany sy ny fiainana an-tany any Kenya, dia nanome ny fanohanan'ny Governemanta ny Global Center Resilience and Crisis Management Center (GTRCM) tamin'ny famelabelaran-kevitra nataony omaly nataon'ny Ministeran'ny fizahantany tao amin'ny biraon'ny Birao fizahan-tany any Jamaika, New Kingston. Minisitry ny fizahantany, Hon. Toa faly tamin'ny fanambarana i Edmund Bartlett.
Androany ny Hon. Edmund Bartlett, Minisitry ny fizahantany ho an'i Jamaika dia nahazo voninahitra iray ary nahazo ny fankatoavana ireo maherifon'ny fizahantany. Ny Minisitra ihany koa dia lehiben'ny Vaomieram-paritra UNWTO ho an'ny Amerika, ary mpikambana mpanorina ary hery manery ao ambadiky ny Ivotoerana momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany any Jamaika miaraka amin'ireo ivon-toerana any Nepal, Malta, Kenya, Japan, ary ireo firenena hafa. Avy any Jamaika ihany koa Diana McIntyre-Pike Nomem-boninahitra tamin'ny toerany tao amin'ny Hall of the International Tourism of Heroes noho ny asany amin'ny maha-mpitarika ny fizahantany ao amin'ny fiarahamonina ary amin'ny fampiofanana ny vondrom-piarahamonina amin'ny fandraharahana.
Alain St. Ange wamin'ny maha minisitry ny fizahantany teo aloha tany amin'ny Repoblikan'i Seychelles ary mpilatsaka hofidina ho filoham-pirenena izy ankehitriny. Izy koa dia filohan'ny Birao Afrikana momba ny fizahantany ary nitazona andraikitra lehibe tamin'ny hetsika eran-tany nandritra ny taona maro.
Profesora Geoffrey Lipman, Juergen Steinmetz
Ambasadaoro Dho Young-shim avy amin'ny Repoblikan'i Korea (Korea atsimo) dia Lehiben'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany ataon'ny Firenena Mikambana momba ny fizahan-tany maharitra ho an'ny fanafoanana ny fahantrana. Madam Dho dia fantatra amin'ny famindrana tendrombohitra hanatsara ny sehatry ny fizahan-tany. Matetika izy no manao izany mangina sy any aoriana ary tsy dia fantatra amin'ny anjara asany amin'ny fitarihana ny fizahan-tany manerantany.
Ambassdor Dho sy Dr. taleb Rifai
Misy ny Profesora Geoffrey Lipman miaraka amina resume mahavariana amin'ny maha talen'ny mpanorina ny World Travel and Tourism Council (WTTC), ny sekretera jeneraly lefitry ny UNWTO, ary ankehitriny filohan'ny SunX any Malta. Mpifindra sy mihozongozona nandritra ny am-polony taona maro izy ary manana tanjona iray: ny dia amin'ny toetr'andro.
Misy Dale Evans, CEO an'ny Charley's Taxi any Honolulu, Hawaii, Etazonia; Peter Byrne, Nosy Mafia, Tanzania.
Misy Tom Jenkins, tale jeneralin'ny ETOA tany Londres izay nanome ny fahitany vao haingana momba ny Travel eropeana amin'ny fanarenana indray ny lalana, rehefa natolotra azy ny fankasitrahana ny maherifo. Eng Dr. Walter Mzembi dia iray amin'ireo minisitry ny fizahantany naharitra indrindra tany Afrika ho an'i Zimbabwe; Aleksandra Gardasevic Siavuijica avy any Montenegro maneho ny fanarenana.travel ao amin'ny Faritra Balkan izao.
Vijay Poonoosamy dia Tale Singapore ho an'ny Vondrona Q1, mpikambana manan-kaja ao amin'ny Hermes Air Transport Organization, mpikambana tsy mpanatanteraka ao amin'ny Board of Veling Group, ary VP taloha ho an'ny Etihad Airways. Izy koa dia ao amin'ny Birao Mpanolo-tsaina ny Forum momba ny fizahan-tany eran-tany Lucerne ary ao amin'ny Komitim-pitantanana Gender Parity ao amin'ny Global Economic Forum. Nanatevin-daharana ny fankalazana ny mahery fo izy tamin'ny 3 ora maraina tany Singapore androany.
Cuthbert Ncube, no filohan'ny Birao fizahantany afrikanina monina any Afrika Atsimo. Hoy izy: ”Andro vao mangiran-dratsy vao mampiditra ny Feon'i Afrika amin'i Afrika atsy Afrika isika. Ny nahaterahan'ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany (ATB) izay manana ny andraikiny hitarika ny fahitana sy ny hetahetan'ny olona mihoatra ny 1,323,568,478 any Afrika. ”
Miorina ao Washington DC Maricar Dionato masoivoho marika ho an'ny Fikambanam-pirenena manerantany ho an'ny Fikambananan'ny mpizahatany. Nomem-boninahitra izy noho ny anjara asany tamin'ny fizahan-tany sy ny fomba namonjeny ny ain'ilay matihanina amin'ny sehatry ny fizahantany mpiara-miasa aminy izay tafahitsoka tao Washington nandritra ny herinandro maro nandritra ny COVID-19. Mona Nafta avy any Jordania dia nidera an'i Maricar ho kintana mamirapiratra amin'ny tontolon'ny fizahan-tany manerantany ankehitriny. Mona Nafta dia arabo mpizahatany amerikana monina any Amman, Jordan.
New York Louis D'Amore nohajaina androany noho ny anjara asany nahagaga nandritra ny am-polony taona lasa izay mpanorina sy filohan'ny Ivon-toerana Iraisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany (IIPT). Noho ny fanarenana.travel dia miara-miasa amin'ny Biraon'ny fizahantany afrikanina izy izao amin'ny fihaonana an-tampon'ny fandriam-pahalemana.
Amin'ny fanarenana.travel irery dia misy maherifo 1000 mahery avy amin'ny firenena 119 vonona hametraka ny zava-misy vaovao amin'ny fizahan-tany. Ny olona rehetra dia asaina handray anjara ary hotendrena ho ao amin'ny Hall of Heroes Iraisam-pirenena momba ny fizahantany.
Ny fotoam-pivoriana androany dia natomboka tamin'ny hafatra manokana avy amin'i Gloria Guevara, CEO sy filohan'ny WTTC.
Tsarà fetin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena!
Fotoana sarotra, nefa hivoaka amin'ity krizy ity isika matanjaka sy tsara kokoa amin'ny fiaraha-miasa! Manantena izahay fa mankafy ny fampielezan-kevitray hampiroborobo ny fiatraikany ara-tsosialy tsara izay natombotsika androany !! Ain'olona an-tapitrisany no voakitika. Manova an'izao tontolo izao ny fitsangatsanganana sy fizahantany! Mizarà ny tantaranao ary zarao ny horonantsary! Misaotra mialoha ary manantena fa tianao !!
Jereo ny horonantsary WTTC sy ny sisa amin'ny andiany Heroes fizahan-tany ankehitriny nataon'i Rebuilding.travel.
-tsy izany, henoy ny podcast. Efa nanana fomba fijery an'aliny izy io raha niparitaka kelikely teo.